PHP: Fayl gelinta la gelinta hoosta Windows
PHP: Fayl gelinta la gelinta hoosta Windows09
Faylasha ku jira server-yada websaydhadu waa inay had iyo jeer noqdaan bilaa banaan (ma aha "kani waa sawir.jpg"), iyadoon lahayn umlauts ama jilayaal gaar ah (ma aha "football.jpg"), iyadoon dib u laaban (ma ahan "Arbeit \_ Auto.jpg") iyo kiis hoose (maahan "" " tijaabinta.JPG "). Dhawaan, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd inaan galo oo aan ka baaraandego feylal aad u tiro badan oo leh magac fayl kasta oo loogu talagalay mashruuc macmiil.
Nidaamyada Linux waxay u oggolaanayaan helitaanka feylasha leh umlauts iyo jilayaal qaas ah asal ahaan, si aan astaamo gaar ah loogu tixgelin halkaan. Waxay umuuqataa mid gebi ahaanba ka duwan nidaamyada Windows: Halkan waa inaad isticmaashaa tabaha qaar oo aad gashaa interface-ka COM Ugu horreyntii, waxaad ku dartaa kordhinta loo baahan yahay ee php.ini
mid. Hadda fasalka caawiyaha ah ee aadka waxtar u leh ee loo yaqaan ' WinfsUtf8' ayaa la isticmaalay, taas oo si weyn u fududeyneysa helitaanka walxaha 'COM' iyo khariidadaha ku dhowaad dhammaan howlaha PHP ee saameeya faylasha. Ka dib markii lagu daro faylka
mid ayaa leh dhammaan fursadaha gelitaanka faylka, tusaale ahaan natiijooyinka
si khaldan u been ah, halka
soo noqda run.